Madaxweyne Xasan sheikh iyo Gudoomiye Jawaari oo hanbalyada Ciidul Adxaa u diray shacabka – Radio Daljir
Oktoobar 15, 2013 1:46 b 0
Muqdisho, October 15, 2013 – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud ayaa mar kale hanbalayda Ciidul Adxaa u diray umadda muslimiinta ah, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed ee kala jooga dunida xili si weyn loogu dabaal-degayo Ciidda.
Madaxweynaha Soomaaliya waxaa uu ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed in ay is cafiyaan Ciidda carafo darteed, sidoo kale waxaa uu ku baaqay in la caawiyo masaakiinta weliba caruurta iyo hooyooyinka aan haysan wax ay bulshada kula damaashaadaan.
Docda kale gudoomiyaha Baarlamanka dalka ayaa hanbalyada Ciidul Adxaa u diray umada muslimiinta iyo kuwa Soomaalida oo idil ?Mahad oo dhan Alle ayaa iska leh, Alle ayaa weyn,? dhammaan Shacbiga Soomaaliyeed meel walba oo ay aduunka kaga noolyihiin iyo Xildhibaannada Golaha Shacabka waxaan ugu hambalyeynayaa Ciida Carafo waxaanna leeyahay Ciid Wanaagsan, Sanadkaan sanad wanaagsan Alle hanooga dhigo ?
Gudoomiyaha Baarlamanka dalka waxaa uu isna ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan in loogu roonaado dadka danyarta ah caawinta iyo in lala qaybsado farxada Ciidda, waxaa uu sheegay in ay tahay suno lagama maarmaan ah in la hirgeliyo.